Eo anoloan’ny Kianjaben’i Mahamasina : Hanafana ny Carnaval de Madagascar i Samoëla sy Mage 4 -
AccueilSongandinaEo anoloan’ny Kianjaben’i Mahamasina : Hanafana ny Carnaval de Madagascar i Samoëla sy Mage 4
Eo anoloan’ny Kianjaben’i Mahamasina : Hanafana ny Carnaval de Madagascar i Samoëla sy Mage 4
Miditra amin’ny andiany faha-4. Hetsika iray tafiditra ao anatin’ny fanakalazana ny fetim-pirenena isan-taona ny Carnaval de Madagascar ary tarika sangany hanafana izany amin’ity taona ity i Samoëla sy ny tarika Mage4. Raha tetsy amin’ny araben’ny fahaleovantena no nanaovana ireo andiany telo teo aloha, dia hifindra etsy anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina kosa ity andiany ity. Tsy miova ny foto-kevitra hijoroan’ity hetsika karakarain’ny Ofisin’ny fizahantany eto Analamanga (Ortana), fa ny fampiarahana ny fizahan-tany amin’ny fampahafantarana ireo kolontsaina nentin-drazana malagasy avy amin’ny faritra maro. « Manodidina ny 2000 ireo mpandray anjara amin’io hetsika io avy amin’ny faritra maro manerana ny Nosy », araka ny fanazavan-dRazafinavalona Harimisa, Talen’ny Ortana.
Ho hita mandritra ny roa andro, ny 16 sy 17 jona izao, ny fampahafantarana ireo kolontsaina avy amin’ny faritra maro amin’ny sehatra samihafa. Ao anatin’izany ny fomba amam-panao, ny hay nahandro, ny fomba fitafy sy ny fomba fandihy, ny taovolo… « Tsy ny vahiny tonga eto amintsika ihany no lazaina hoe mizaha-tany, fa na isika eto Madagasikara avy amin’ny faritra iray mandeha amin’ny faritra iray dia efa isan’ny fizahantany izany », hoy hatrany ny fanazavany raha niresaka ny maha-fizahantany ny « Carnaval de Madagascar ».
Anisan’ny hetsika iray ao anatin’ny « Carnaval de Madagascar » ny filaharambe hanehoana ireo hira sy dihy avy amin’ny fiavian’ireo mpandray anjara. Hiainga eo Anosy manoloana ny carlton izany ny sabotsy amin’ny 11 ora atoandro ary hifarana eo anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina hanaovana ny hetsika.
Ankoatra ny fampisehoana hiarahana amin’ny tarika Mage 4 ny sabotsy amin’ny 3 ora tolakandro sy izay hafanain’i Samoëla ny Alahady amin’ny 4 ora tolakandro, dia anisan’ny ho hita ao anatin’ity hetsika ity ihany koa ny fanatanjahatena an-kira hiarahana (zumba), ny Tsenaben’ny faritra ahitana ireo vokatrasamihafa avy amin’ireo faritra mandray anjara…
Nanomboka omaly tolakandro ny fikaonandohan’ny minisitra Frankôfôna andiany faha-32 na ny « 32ème session de la conférence ministérielle de la Francophonie ». Ny Minisitra ny Raharaham-bahiny malagasy, Attalah Béatrice no Filoha nitarika ny Fivoriana fa nanotrona fotsiny ...Tohiny
Depiote miisa 73 : Lasa mpampihorohoro?